मार्केट पार्कमा के हुँदैछ? • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
प्रकाशित अप्रिल 21st, 2021
वसन्त एक उत्तम सुरुवात मा बन्द छ मार्क्वेट पार्क! छिमेकीहरूले पहिले नै राम्रो मौसमको फाइदा लिइरहेका छन् डचटाउनको बीचमा बसालिएको ठाउँबाट बाहिर निस्कन र मजा लिन। हामीले लामो समयदेखि मार्क्वेट पार्कलाई हाम्रो छिमेकको लागि अविश्वसनीय सम्पत्तिको रूपमा मान्यता दियौं, तर त्यहाँ अझै धेरै कामहरू बाँकी छन्।
अहिले सम्म, हामीले पहिले नै एक गरिसकेका छौं किकबल प्रतियोगिता को समर्थन मा मार्क्वेट समुदाय दिवस। MCD स्कूलको ठूलो कार्यक्रम हो जुन पार्कमा अगस्टमा हुन्छ। उनीहरूले ब्याकप्याक्स, स्कूल आपूर्ति, कपडा, कपाल, र अधिक प्रदान गर्दछ डचटाउन बच्चाहरूलाई आफ्नो स्कूल वर्षको ठीक सुरू गर्न मद्दत गर्न। हामीसँग सोह्र टोलीहरू मैदानमा लगेका थिए र दर्जनौं दर्शकहरू त्यसमा जरा गाड्न आए। यहाँ थप फोटोहरू हेर्नुहोस्.
औपचारिक टूर्नामेन्ट सुरुमा मार्चको अन्त्यका लागि निर्धारित थियो, तर त्यो एक ब्लाउट थियो — केही गम्भीर गस्टहरूको साथ प्रति घण्टा 30० माईलको लगातार बतासहरूले खेल्न असम्भव बनायो। हामीले खेल स्थगित गर्यौं, तर हामी अझै पार्कमा एक दिनको धेरै बनायो। छिमेकीहरूले संगीत र ग्रील्ड पखेटा र ब्रेटहरू खेल्थे, बच्चाहरू र अभिभावकहरू खेल्थे, र कसैलाई पतंग ल्याउनको लागि दूरदर्शिता थियो!
मार्क्वेट पार्कमा बढी आइतवार रमाईलो
हामीले यी आइतवार दिउँसोमा यति रमाइलो गर्यौं कि हामी यसलाई नियमित चीज बनाउन चाहान्छौं। चाँडै आउँदैछ: दक्षिण साइड आइतवार मार्किट पार्कमा! अधिक विवरण आउनको लागि आँखा राख्नुहोस्।
आइतवारहरू मार्क्वेट पार्क भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय हो। खेल मैदान र हरियो ठाउँको मजा लिनुहोस्, र समात्नको लागि एक टाँस्नुहोस् लिगा लैटिना फुटबल खेल.
बाटोमा गर्मी रमाईलो
हामी यो घोषणा गर्न उत्साहित छौं कि लगातार तेस्रो वर्षमा हामी होस्टिंग हुनेछौं मार्क्वेट पार्कमा फिल्म रातहरू! यी घटनाहरूले छिमेकीहरू सँगै ल्याए, महामारीको माध्यमबाट पनि, पार्कको आनन्द लिन, सामुदायिक गतिविधिहरूको बारेमा जान्न, र केही परिवार मैत्री मनोरन्जन लिन। यस गर्मीमा हामीसँग पार्कमा तीनवटा रातहरू हुने छन्:
हामी अन्तिम गर्मी फिल्म रात पूलमा डाइभ-इन चलचित्र बनाउने आशा गरिरहेका छौं - जुन हामी यस गर्मीमा पुनः खोल्न पाउँदा अत्यन्त खुसी छौं! हाम्रो छिमेकको बीचमा एक ठुलो, नि: शुल्क, सार्वजनिक पोखरी हुनु बच्चा र परिवारका लागि डचटाउनका लागि अचम्मको सम्पत्ति हो।
र Marquette मनोरन्जन केन्द्र हाम्रो छिमेकी बच्चाहरु को लागी अर्को महान स्रोत हो। यस गर्मीमा, रेक सेन्टरले होस्ट गर्नेछ बास्केटबल, बक्सिंग, र अन्य शिविरहरू त्यो छिटो भइरहेको छ।
मार्क्वेट पार्कको लागि पार्टनरहरू
हामीले छिमेकाहरूको समर्पित समूह पाएका छौं, सहित मार्क्वेट पार्कको सहयोगी र डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन, पार्क पुन: सक्रिय गर्न सक्दो प्रयास गर्दै। पार्क डचटाउनको लागि एउटा अमूल्य सम्पत्ति हो, जुन एउटा हो दक्षिण पक्षमा घनेस्ट, कान्छी, र सबैभन्दा गरीब समुदायहरू.
डचटाउन साउथले सेप्टेम्बरमा पार्कमा साझा ध्वनि महोत्सव आयोजना गरेको छ, जसले छिमेकीहरूलाई संगीत र नृत्य मार्फत एक साथ ल्याउँदछ। उनीहरूले एक स्टोरीबुक हिड्ने आयोजना गरेका छन छिमेकका बच्चाहरूलाई पढाइको खुशी ल्याउन। र डीएससीसी हाम्रा छिमेकीहरूको साथ रहन्छ किनकि हामीले मार्क्वेटमा सुधारको लागि जोड दिइरहेका छौं।
मार्क्वेट पार्कका मित्रहरू आयोजित २०१ fund मा कोष स .्कलनकर्ता कि अन्यथा असुविधाजनक पोखरीको लागि कुर्सी र लाउन्जहरू प्रदान गर्न $ 7,000 भन्दा बढी उठाउँदछ। हामी नयाँ फर्निचर राख्ने आशा गर्दैछौं जुन यो वर्ष पूल खुल्छ। एएमपी घटनाक्रमको योजना बनाउन र मार्क्वेट पार्कमा रुचि र लगानी आकर्षित गर्न अग्रणी रहेको छ।
मार्क्वेट पार्कमा चुनौतीहरू
जबकि हामी मार्क्वेट पार्क र डचटाउन भर सकारात्मकहरू बोल्न चाहान्छौं, हामीले याद गर्नुपर्दछ कि हामीले मार्क्वेटमा हेर्न चाहेको आवश्यक सुधारहरू प्राप्त गर्न संघर्ष गर्यौं। मार्क्वेट पार्क हाम्रो छिमेकीहरूबाट कडा मेहनतको माध्यमबाट सुधार हुँदैछ र थुप्रै अवरोधहरूको बाबजुद।
मार्क्वेट पार्क पूल लामो समयदेखि चेन लिंक फेंसले घेरिएको छ काँटेदार तारको छेउमा माथि छ। वर्षौंको लागि, हामीले अनुरोध गर्यौं कि काँटेको तार तल आओस्। यो प्रभावी ढ the्गले हुन सक्ने सामयिक गुनासो रोक्ने छैन, र वास्तवमा शहर मा एक ठूलो दायित्व हुन सक्छ (त्यस विषयमा हाम्रो पत्र पढ्नुहोस्).
तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रा बालबालिका र त्यस्ता कठोर र अप्रिय वातावरणका साथ परिवारमा बार लगाउनुले यो सन्देश दिन्छ कि पूल संरक्षकहरू स्वागतयोग्य भन्दा कम छन्। हाम्रो पोखरी जेल जस्तो देखिनु हुँदैन। हामीले काँडेदार तारलाई सम्बोधन गर्न बारम्बार अनुरोध गरेका थियौं, र केही भ broken्ग गरिएका प्रतिज्ञाहरूलाई हटाएर जवाफमा थोरै प्राप्त भयो।
काँटेदार तार र पोखरी सामानको अभावको साथमा, लाकर कोठाहरू (र रेकर्ड सेन्टर जसमा ती समावेश गर्दछ) कुनै नराम्रो आकारमा छ। सुविधाहरूले प्रमुख अपग्रेडहरू प्रयोग गर्न सक्दछ, तर यसको सट्टा आधारभूत मर्मतसम्भारको अभावबाट ग्रस्त हुन्छन्।
सकर खेलाडीहरूको लागि संघर्ष
मार्क्वेट पार्कका सहयोगीहरू पनि प्राप्त गर्न काम गरिरहेका छन् फुटबल सुविधाहरूमा सुधार पार्कमा। यद्यपि फुटबल क्षेत्र लिगा लातिना, युवा फुटबल टोली, र छिमेकीहरू बल आउट गर्न लायकका लागि नियमित रूपमा प्रयोग गर्दछन्, सुविधाहरू लगभग अस्तित्वगत छैनन्। जाल बिना नै सडेको काठ गोल पोष्टको एक जोडीले पिचको अन्त्यमा चिनो लगाउँछ, जुन गड्ढा र पोखरीहरूले पोकमार्क गर्दछ। खेलाडीहरू प्राय: मैदानको अगाडि घाँस र कालो लाइनहरू आफैंको अगाडि बाहिर आउँदछन्।
चलचित्र रातहरूमा बनाउने
हामीले हाम्रो चलचित्र नाइट्स पहिले नै योजना बनाएको हुनाले हामी शहरलाई यथेष्ट सूचना दिन्छौं कि त्यहाँका बासिन्दाहरूको ठूलो समूह एक निर्दिष्ट समयमा पार्कमा हुनेछ। रद्दीटोकरी हटाइएको र घाँस काटियो भनेर अनुरोध गर्न हामी महिनौं, हप्ताहरू र दिनहरू कल गर्दछौं। यी अनुरोधहरू सामान्यत: अवलोकन गरिन्छ।
प्रत्येक चलचित्र नाइट अघि, हाम्रा स्वयम्सेवकहरूले फिल्ड हाउस वरपर र पार्क वरिपरिको रद्दीटोकरी टिप्नको लागि समय छुट्याउने निश्चित गर्नुहोस्। रद्दीटोकरीका क्यानहरू सामान्यतया ओभरफ्लो हुन्छन्, त्यसैले हामीले रद्दीटोकरीलाई प्याक गर्नुपर्दछ र नजिकैको गल्ली डम्पस्टरहरूमा लैजानु पर्छ। यो हामीले थाहा पाएभन्दा राम्रो पार्क छोड्ने सुनिश्चित गर्न, हाम्रो स्वयम्सेवकहरू र एक भाडाका कर्मचारीहरू सबै कुरा ठीकसँग सफा भएको सुनिश्चित गर्न अन्धकारमा बस्छन्।
हामी पनि आमन्त्रित गर्दछौं सेन्ट लुइस महानगर पुलिस विभाग हाम्रो फिल्म नाईटमा सामुदायिक स officers्लग्नता अफिसरहरू पठाउन - सुरक्षा चिन्ताको कारणले नभई, उनीहरूले सेवा गर्ने समुदायसँग भेट गर्न र कुराकानी गर्न पुलिसलाई अवसर दिनको लागि। पुलिस आइपुग्छ, पार्कको किनारमा आफुलाई लगभग दृश्यको बाहिर स्टेसन गर्दछ, र उनीहरूको सवारीबाट कहिल्यै बाहिर निस्कदैनन्।
क्षेत्र हाउस असफलता
सुन्दर मार्क्वेट पार्क फिल्ड हाउस गत दशकभित्रै महत्वपूर्ण लागतमा मर्मत गरिएको थियो। जे होस्, यो गम्भीर रूपमा कम उपयोग गरीएको थियो र छिटो निराश हुन गयो, या त पुनर्स्थापना कार्यको गुणवत्ताको कारण वा आधारभूत चलिरहेको रखरखावको अभावका कारण। लिफ्ट र वातानुकूलित प्रणाली असफल भएको छ, हामीले त्यहाँ आयोजित गर्न चाहेको घटनाहरूको लागि फिल्ड हाउसलाई पहुँचयोग्य र इनहेस्टेप्टबल बनाएको छ - शहरले अनुमति प्रदान गर्थ्यो र अत्यधिक भाडा शुल्कमा हामीसँग काम गर्नेछ।
फिल्ड हाउसमा शौचालयहरू पनि खराबी हो। नतिजाको रूपमा, हामीले हाम्रो सबै कार्यक्रमहरूमा पोर्टेबल रेस्टरूमहरू प्रदान गर्नुपर्दछ। त्यसो गर्न लागत पहिले नै सानो गैर-नाफा बजेटबाट आउँदछ। (यदि तपाईं हामीलाई बजेट अलि बढी फैलाउन सहयोग गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं यहाँ दान गर्न सक्नुहुन्छ.)
मार्क्वेट पार्क को भविष्य
हामीसँग डचटाउनमा एउटा समुदाय छ जुन मार्क्वेट पार्क प्रयोग गर्न चाहन्छ र आवश्यक छ। हामीसँग छिमेकीहरू र समुदाय सरोकारकर्ताहरूको एक बलियो र बढ्दो आपतकालिन छ हाम्रो सीमित संसाधनहरूको साथ हामीले सकेसम्म उत्तम गर्नको लागि आफ्नै समय, पसिना, र कोषहरू अगाडि राखी।
तर शहर नेतृत्वले डचटाउनको बीचमा यो अद्भुत सम्पत्ति विकास गर्न समय वा संसाधनहरू लगानी गरेको छैन जसले यती धेरै मानिसहरूलाई सेवा दिन सक्छ जुन जान ठाउँहरू जान्छ र के गर्न आवश्यक छ। मार्क्वेट पार्क एक छेउछाउको बीचमा बसालिएको छ जुन सहरमा अरू कतै भन्दा प्रति वर्ग माइल मानिसहरू बढी गर्दछ। करीव %०% हाम्रा छिमेकीहरू १ 40 बर्ष मुनिका छन्, र मध्यम घरेलू आय सेन्ट लुइसको लागि औसत भन्दा कम छ।
डचटाउन छिमेकीहरू मार्क्वेट पार्कमा स्वागत र सुरक्षित महसुस गर्न योग्य छन्। हामी घाँस काट्न चाहन्छौं, रद्दीटोकरी बाहिर निकाल, र काँटेदार तार हटाइयौं। हामी सफा र सुरक्षित रिक केन्द्र चाहान्छौं। हामी कार्य कोठा कोठा चाहन्छौं। हाम्रा छिमेकीहरू र हाम्रो छिमेकी यी चीजहरूका लागि योग्य छन्।
२० औं वार्डमा एल्डरवामन कारा स्पेंसर र २th औं वार्डमा एल्डरम्यान शेन कोहनले मार्क्वेट पार्कमा सुधारको लागि दुबै समर्थन गरेका छन्। तर यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि शहर पार्क बारे धेरै निर्देशन र निर्णयहरू कार्यकारी शाखा come मेयर अफिस र लोक सेवा बोर्डबाट आएका हुन्।
मेयर तिशौरा ओ जोन्सको उद्घाटनको साथ, हामीसँग अपील गरे उनको र शहरलाई नव ब्याज र मार्क्वेट पार्कमा लगानीको लागि। हामी आशा गर्छौं कि मेयर जोन्स र उनको टीममा हामीसंग इच्छुक र सक्षम साझेदार छ। हामी एक राम्रो मार्क्वेट पार्क र एक बलियो डचटाउन निर्माण गर्न प्रतिबद्धताको लागि आशा राख्छौं। मेयर जोन्स र सेन्ट लुइसको शहरमा पछाडिको एक समर्पित समूह हुनेछ। हामी उनलाई यहाँ चाँडै भेट्ने आशा गर्दछौं।
यदि तपाईं यो पढ्दै हुनुहुन्छ र तपाईं मेयरको कार्यालयमा हुनुहुन्न, तर तपाईं अझै मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं एक बनाउन सक्नुहुन्छ एक पटक or चन्दा निरन्तर हामीलाई मार्क्वेट पार्क र डचटाउन भर मा हाम्रो काम जारी राख्न मद्दत गर्न।
तल दायर गरिएको मार्क्वेट पार्क. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. डचटाउन र मार्क्वेट पार्क. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अप्रिल 21st, 2021 .
DutchtownSTL.org मार्क्वेट पार्क मार्केट पार्कमा के हुँदैछ?